Hormuud Telecom oo sanadkii 2aad qaaday Imtixaanka Deeqda Waxbarasho (Sawiro) - Jowhar Somali news Leader
Home News Hormuud Telecom oo sanadkii 2aad qaaday Imtixaanka Deeqda Waxbarasho (Sawiro)
Hormuud Telecom oo sanadkii 2aad qaaday Imtixaanka Deeqda Waxbarasho (Sawiro)
Waxaa maanta 400 oo arday oo kasoo baxay dugsiyada sare u fariisteen imtixaan deeqda waxbarasho ee ee bixiso shirkada isgaarsiinta Hormuud Telecom, kuwaas oo buuxiyay shuruudaha ka qeyb galka.
Ardaydan ayaana laga doonayaa 30ka Qof ee kaalmaha hore ka gala Imtixankaan Iyaga oo Dalbanaya jamacad kasta oo ay donayaan oo ku taala gudaha dalka qarashaadka Jamacada Iyo agabkooda waxbrasho 30-kaan arday ayaa waxaaa bixin doona Shirkada Hormuud telecom sidoo kale ardayda waxaa la siin doonaa tababaro ku saabsan taqasuska ay baranayaan.
Goobta Uu ImtixaankaanKa ka socday ayaa waxaa kormeer ku tagay Wasiiru Dowlaha Wasarada Waxbarashada Xukumda Somaliya masuulyiinta ka socday Shirkada Hormuud Telecom.
Ugu Horeyntii Waxaa Goobta Ka Hadlay Gudomiye Ku Xigeenka Hey’adda Hormuud Salam Fondetion Cabdiraxman Ibrahim Cilmi Isaga oo Ka warbixiyay Imtixaankaan ay qadayaan maanta ayna tahay fursad ay ugu fa’iideynayaan ardayada leh hamiga waxbrasho ee dhameyay Dugsiyada Sare Isla markana aan awoodin In ay Iska bixiyaan qarashaadka Waxbarasho Hormuudna ay garab tagantahay mar waliba.
Wasiiru Dowlaha Wasaarada Waxbarashada Xukumda Federalka Somaliya Mudane Cabdirixmaan Maxamuud Cabdulle Oo Dhankiisa Goob Joog Ahaa imtixaanka Ayaa shirkadda hormuud ku amanay garab Istaaga ay bulshada somaliyeed xili waliba La garabtagantahay Isga Oo dhiirageliyay ardayda u farisaneysay Imtixaanka maanta.
Sanadkii labaad ayay shirkadda hormuud qaadeysaa imtixaanka lagu helayo deeqaha waxbarasho ardayda ka soo baxday dugsiyada sare, waxaana deeqdan si weyn usoo dhaweeyay ardayda ka baxday dugsiyada sare .
Imtixaanka deqaha ardayda Hormuud Salama